३० वर्षकी महिलाले १७ वर्षकाे केटाे भगाईन्, श्रीमान रुदैं मिडियामा ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)….. – Jagaran Nepal
३० वर्षकी महिलाले १७ वर्षकाे केटाे भगाईन्, श्रीमान रुदैं मिडियामा ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)…..
काठमाडौं । भनिन्छ प्रेम अन्धो हुन्छ । प्रेममा जे पनि हुन सक्छ । आजको यो भिडियोमा यस्तै प्रमाण पेश भएको छ । एक ३० वर्षकी महिला १७ वर्षका पुरुषसंग दोस्रो विवाह गरेपछि अहिले ति महिलाका श्रीमानले न्यायका लागि मिडिया गुहारेका छन् ।
नारायणगढमा बस्दै आएका मनिष विक, उनी पाल्पाका स्थानिय बासीन्दा हुन् । उनी करिब ३ महिना देखि अहिले बेचैन छन् । उनको श्रीमती ३० वर्षकी हुन् । अहिले उनले १७ वर्षको युवकसंग दोस्रो विवाह गरेर गएपछि उनी मिडियामा आएका हुन् । २ छोरा र छोरीकी आमा समेत रहेकी उनी श्रीमानसंग १४ वर्ष देखि चितवनमा बस्दै आएकी थिइन् ।
केही महिना देखि आफ्नो श्रीमती छोरी समेत लिएर गएपछि उनी बिचल्लीमा परेको बताएका छन् । घरमा अरु दुई २ छोरा पनि छन् । श्रीमती हराएपछि उनी अहिले खोजीमा छन् । यदि साँच्चै नै दोस्रो विवाह गरेर गएको हो भने आफुसंग सम्बन्ध विच्छेद गरेर जान भनेका छन् । श्रीमती लैजाने आफ्ना मामाका छोरा भाई भएको बताएका छन् ।
चैत १२ गते क्षेत्रपुर भन्ने स्थानवाट आफ्नो आमा गएको दुई छोराले समेत देखेको बताए । छोराले आमा भनेर बोलाउँदै पछि पछि गएपछि पनि उनले नसुनेर अटोमा चढेर पोखरा बसपार्क हुँदै भैरहवा पुगेपछि १७ वर्षको केटासंग गएको उनको भनाई छ । त्यसरी लैजाने केटा आफ्नै भएको बताए ।
फोनमा तिमी किन गएको ? भनेर भनेर सोध्दा तपाई खाली कराउने र गाली गर्ने गरेका कारण आफु हिड्न बाध्य भएको बताएको बताइन् । श्रीमतीले आफ्नो आमाको जग्गा धितो बन्धक राखेर २५ लाख रुपैया ऋण निकालीदिएको पनि स्वीकार गरेका छन् । उनले श्रीमती अझै पनि फर्केर आए छोराहरुको भविष्यका लागि स्वीकार गर्ने बताएका छन् । यि दुई छोरा मैले एक्लै हेर्न सक्दिन आइन् भने म छोराहरुको भविष्यका लागि स्वीकार गर्छु उनले भने । हेर्नुहोस् भिडियो: